warkii.com » Saadaashii Lagu Ceeboobay! Khabiirada Sky Sports Oo Ku Fashilmay Saadaashoodii Afarta Sarre & Chelsea Oo Raaligelin U Baahan
Saadaashii Lagu Ceeboobay! Khabiirada Sky Sports Oo Ku Fashilmay Saadaashoodii Afarta Sarre & Chelsea Oo Raaligelin U Baahan
Kooxda Frank Lampard ee Chelsea ayaa gabi ahaanba laga saaray u tartanka afarta kaalimood ee ugu sareysa horyaalka Premier League bilowgii xilli ciyaareedkan iyadoo khabiirada Sky Sports ay aaminsanaayeen inaysan awood u laheyn inay u soo baxdo Champions League.
Laakiin Blues ayaa haatan qarka u saaran inay u soo baxdo Champions League iyadoo ku jira kaalinta afaraad islamarkaana hal kulan ay ka harsan tahay horyaalka Premier League.
Barbaro ay gurigooda kula galaan Wolves Axada ayaa u xaqiijin doonta Chelsea inay ka ciyaaraan Champions League xilli ciyaareedka danbe.
Xitaa waxay u soo bixi karaan Champions League haddii ay guuldarro ka soo gaarto Wolves islamarkaana Man United ay garaacdo kooxda kaalinta shanaad ee Leicester City.
Khabiirada Sky Sports ayaa intooda badan saadaaliyay in Man City ay difaacan doonto horyaalka Premier League inkastoo mid ka mid ah uu Liverpool u saadaaliyay, xitaa waxaa jiray qaar Arsenal u saadaaliyay afarta sarre.
Laakiin Gunners waxay ku jirtaa kaalinta 10aad ka dib xilli ciyaareed musiib ah, kaalinta ugu fiican ee ay soo geli karto waa kaalinta 8aad.
Waa tan saadaashii ay khabiirada saameeyeen bilowgii xilli citaareedkan:
Xiddigii hore ee Liverpool waxa uu saadaaliyay in Man City iyo Liverpool ay horyaalka ku dagaalami doonaan mar kale balse wuxuu aaminsanaa in City ay mar kale qaadi doonto. Wuxuu afarta sarre u saadaaliyay Spurs iyo Man United isagoo ku doodayay in Chelsea iyo Arsenal aysan laheyn awood ay ku tartamaan.
Xiddigii hore ee Man United Gary Neville ayaa saadaaliyay Man City ay qaadi doonto horyaalka halka Liverpool uu kaalinta labaad dhigay, sida Souness waxa uu kaalimaha seddexaad iyo afaraad u saadaaliyay Tottenham iyo Man United.
Daaficii hore ee Liverpool ayaa isna ku raacay labada nin kore saadaashooda, isagoo aaminsanaa in Man City ay markii 3aad oo isku xigta ku guuleysan doonto horyaalka, Liverpool ayuu kaalinta labaad geliyay, halka Tottenham uu seddexaad dhigay laakiin wuxuu kaalinta afaraad u saadaaliyay Arsenal isagoo meesha ka tuuray Man United iyo Chelsea.
Khabiirka BT Sport ahna daaficii hore ee Man United Ferdinand ayaa ku feker ahaa Souness isagoo aan hubin kooxdii horyaalka qaadi laheyd City iyo Liverpool inkastoo uu City kaalinta 1aad geliyay, wuxuu seddexaad iyo afaraad geliyay Spurs iyo Man United.
Waa khabiirka kaliya ee saadaaliyay in Liverpool ay ku guuleysan doonto horyaalkeedii ugu horeeyay ee tan iyo 1990.
Wuxuu kaalinta labaad u saadaaliyay Man City, seddexaad Tottenham halka uu kooxdiisa hore ee Arsenal u saadaaliyay kaalinta afaraad.
Redknapp ayaa sheegay bilowgii xilli ciyaareedkan in taageerayaasha Chelsea ay waalan yihiin haddii ay aaminsan yihiin inay afarta sarre ku dhameysanayaan oo ay koob ku guuleysanayaan.
Kooxda Galbeedka London ka dhisan ayaa haatan ku jirta kaalinta afaraad, waxay sidoo kale joogaan finalka FA Cup, Lampard ayaa tusay ina abtigiis Redknapp inay aheyd inuu ku kalsoonaado.